Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 28/05/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 28/05/2019
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ နေ့စဉ်သတင်းအကျဉ်းချုပ် (အင်္ဂလိပ်+မြန်မာ) အား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။...
(နေပြည်တော်၊ ၂၈-၅-၂၀၁၉ ရက်)2nd High Level meeting on ASEAN cooperation to repatriate displaced persons from Rakhine State is held
Naypyitaw May 27
The 2nd High Level meeting on ASEAN cooperation in the work process of repatriating displaced persons from Rakhine State was held at Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement on 27 May 2019. The meeting was jointly chaired by Union Minister Dr. Win Myat Aye and ASEAN Secretary-General Dato Lim Jock Hoi.
At the meeting, Union Minister said that ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ASEAN- ERAT) visited to Rakhine State and conducted an initial survey for repatriation of displaced persons from Rakhine State and then preparedareport on it. He also noted that the report described the actual situation on the ground in Rakhine State and the government’s systematic program set and readiness to conduct the repatriation work. The report was planned to be submitted to ASEAN Summit on June 2019.
Next, ASEAN Secretary-General said the initial survey report’s recommendations will be jointly implemented andamore complete assessment will be made when the repatriation begins. ASEAN will cooperate more in the ongoing Rakhine State stability and long term development works.
Afterwards, the implementation program to implement findings and recommendations of ASEAN-ERAT group, arrangements made to conduct complete assessment and implementation plan on human resources development program toward disaster response were discussed.
နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အာဆီယံက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် အဆင့်မြင့်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အာဆီယံက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဒုတိယအကြိမ် အဆင့်မြင့်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို မေလ ၂၇ ရက်တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒါတိုလင် ကျောက်ဟွိုင်တို့က ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အာဆီယံအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးနှင့် ဆန်းစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့ [ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ASEAN-ERAT)] သည် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ သွားရောက်ကာ ကနဦးလိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ ပြုစုခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြေပြင်တွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်တည် တွေ့ရှိချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်လက်ခံရေးဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်များကို အစိုးရက စနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားရှိသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ အစီရင်ခံစာအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကျင်းပမည့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ တင်ပြရန် စီစဉ်ထားရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် အာဆီယံအတွင်းရေးမှုးချုပ်က ကနဦးလိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ပါ အကြံပြုချက်များအား ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသော ဆန်းစစ်လေ့လာမှုကိုလည်း ပြန်လည်လက်ခံရေး စတင်သည့်အချိန်တွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး၊ အာဆီယံသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ASEAN-ERAT အဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကနဦးလိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်လေ့လာ တွေ့ရှိချက်ပါ အကြံပြုချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအစီအစဉ်၊ ပြီးပြည့်စုံသော ဆန်းစစ်လေ့လာမှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားမှု အစီအစဉ်နှင့် ဘေးအန္တရာယ် တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။